निर्माण Archives - Page3of 61 - Wash Khabar
युनिसेफले बनायो कालिकोटको साढे तीन सय घरमा धारा
कालिकोट : कालिकोटको रास्कोट नगरपालिकाको तीन वटा वडामा झण्डै साढे तीन सय घरमा एक घर एक धारा निर्माण गरिएको छ । युनिसेफ नेपालको सहयोगमा रास्कोटको ९ नं. वडामा १ सय ८० घर, वडा नं. ६ मा ८१ घर र वडा नं. २ मा ८० घरमा घरघरै धारा निर्माण गरिएको नगरप्रमुख काशिचन्द्र बरालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार पानीमा मितव्ययिता अपन...
जब अष्ट्रेलियाका विद्यार्थी खानेपानी आयोजना हेर्न काभ्रेको देउराली पुगे
काभ्रेपलाञ्चोक : गाडीबाट एकाएक नयाँ मानिसहरु ओर्लिए । अरु बेला भन्दा बेग्लै गाडी र अपरिचित मानिसहरु देखेपछि स्थानीय बासिन्दा केहीबेर अचम्मित भए । गाडीबाट ओर्लिएपछि उनीहरु सीधै ओरालो लागे । नयाँ अनुहार भएपनि स्थानीय देख्दा उनीहरु नमस्कार गर्थे । जन्तीको झल्को दिने गरी काभ्रेको धुलिखेल नगरपालिका २, देउराली पुगेका उन...
मुहान सुकेपछि जमिन मुनिको पानी खोजी गरिदै
अर्घाखाँची : मुहान सुकेपछि यहाँ जमिनमुनि पानी खोज्ने अभियान चलाइएको छ । जथाभावी मोटरबाटो खन्दा मुहान नै सुकेपछि खानेपानीका ट्यांकी र धारा अलपत्र परेका हुन् । गाउँमा खानेपानी उपलब्ध गराउन अब यहाँ बोरिङलाई विकल्प ठान्न थालिएको छ । जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहका अधिकांश गाउँमा अहिले खानेपानीको समस्या छ । मुहानबाट पाइपमा ...
खानेपानी आयोजना निर्माण पश्चातको चरण किन आवश्यक छ ? (भिडियो रिपोर्ट)
काठमाडौ : अधिकांश खानेपानी आयोजनाको काम सम्पन्न भएपछि सहयोगी निकायले उपभोक्ता समितिलाई हस्तान्तरण गरिन्छ । उपभोक्ता समितिले पनि आयोजना सम्पन्न गरेसँगै आफ्नो जिम्मेवारी सकियो भन्ठान्छन् र जत्तिबेला सम्म पानी झर्यो त्यत्तिन्जेलसम्म उपभोक्ताले पानी पिउँछन् । उपभोक्ता समिति नै निश्क्रिय भएपछि खानेपानी आयोजनामा सामान्य स...
अमेरिकी सहयोगमा खानेपानी आयोजना
लमजुङ : करिब २ दशकयता विकासको खोजी गर्दै गाउँबाट बेंसीतिर बसाइँ सर्ने क्रम तीव्र बन्यो । गाउँ खाली हुँदै गयो । बेंसीमा सहरीकरण बढ्दै गयो । भकुण्डे क्षेत्रको फाँट र खेतैभरि घरहरू धमाधम निर्माण गरिए । सडक, बिजुली, टेलिफोन जडान गरिए । स्कुल र स्वास्थ्य संस्था भकुण्डे फाँटमै । डुम्रे–बेंसीसहरका सडकमै जोडिएर घरहरू निर्म...
काभ्रे उपत्यका खानेपानी आयोजनाबाट एडिबीले हात झिक्यो, ७ पटक म्याद थप्दा पनि आयोजना अधुरै
बनेपा : एशियाली विकास बैंकले काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजनाबाट हात झिकेको छ। २०७० जेठ महिनाबाट निर्माण सुरु भएको आयोजना दुई वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखे पनि ९ पटकसम्म म्याद थप्दा समेत पुरा नभएपछि एडिबीले हात झिकेको हो। काभ्रे उपत्यका एकीकृत खानेपानी आयोजना एडिबीको ऋण सहयोगमा मझौला एकीकृत सहरी वातावरणीय स...
लगातारको हिमपातले मनाङमा खानेपानीको समस्या
मनाङ : हिमपातपछि हिमाली जिल्ला मनाङमा खानेपानीको समस्या भएको छ । चौपायले समेत खानेपानी पाएका छैनन् । हिमपात पछिको अत्याधिक चिसोले पाइपभित्रको खानेपानी जम्ने तथा स–साना पानीका स्रोत र धारा जम्न थालेपछि खानेपानीको समस्या भएको हो । खानेपानीको स्रोतमा हिउँ जमेको छ । डाँडाकाँडा र बस्तीभरी हिउँ ढाकिएकाले पानीका ठूला स्रो...
दिगोपनाको नमूना, सङ्खाबुङ खानेपानी आयोजना (भिडियो रिपोर्ट)
इलाम : खानेपानी आयोजना बन्छन्, धारा ठडिन्छन्, दुई चार हजार पाइप लाइन विछ्याइन्छ, दुई चार वटा ट्याङ्की बन्छ । तर आयोजना समुदायलाई हस्तान्तरण गरेको केही समयपछि धाराबाट पानी झर्न छाड्छ । पहाडी भेगमा यस्तै नियति झेलिरहेका खानेपानी आयोजनाहरु भन्दा विल्कुलै फरक छ इलामको माईजोगमाई गाउँपालिका १ मा निर्मित नयाँ बजार – सङ्खाबुङ ...
तेह्र करोडको आयोजना, पाँच वर्षमा आधा काम पनि भएन
तनहुँ : पाँच वर्षमा पनि खानेपानी आयोजना पूरा नहुँदा भानु नगरपलिका १३ र व्यास नगरपालिका ९ का स्थानीयले सास्ती खेप्दै आएका छन् । ०७१ बाट सुरु भएको सतिस्वारा–मिर्लुङ लिफ्टिङ खानेपानी आयोजनाको काम अझै पूरा भएको छैन । समयमै आयोजना सम्पन्न नहुँदा स्थानीयको दैनिकी खानेपानीको जोहोमै बित्ने गरेको छ । गाउँमा पानीको स्रोत ...